एयरफोनमा लामो समयसम्म गीत सुन्नुहुन्छ ? आउन सक्छन् यस्ता समस्या - ABNews Nepal
Jan 5, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, latest news nepal, latest newsn nepal, latest ramailo samachar, nepali samachar, taja khabar nepal
२१ पुस, काठमाडौं । तपाईंले लामो समयसम्म ठूलो आवाजमा एयरफोनबाट गीत सुन्ने वा अरुसँग कुरा गर्ने गर्नुभएको छ ? एयरफोनमा लामो समयसम्म आवाज सुन्ने र बाहिरै पनि ठूलो स्पिकरमा आवाज सुन्ने गर्नुभएको भने आजै बन्द गर्न चिकित्सकहरु सुझाव दिन्छन् । लामो समयसम्म एयरफोन र ठूलो आवाज सुनेर बस्दा कानको दीर्घकालीन समस्या निम्तिने जोखिम बढी हुने नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
कानमा धेरै कोषिकाहरू हुन्छन् । कपालको कोषिका भनेर चिनिने सानो कपाल जस्तो संरचनाहरू छन् जसले कानबाट मस्तिष्कसम्म ध्वनि प्रवाह गर्ने काम गर्छन् । धेरै ठूलो आवाजले यी कोषिकामा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ, जसले ध्वनि प्रसारणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउँछ ।
एयरफोनहरु धेरै साना भएपनि यसबाट निस्कने आवाजले तपाईंको कानको पर्दामा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । ध्वनि कानबाट मस्तिष्कसम्म पुग्छ र यसले स्नायु प्रणालीलाई असर गर्छ । जसले गर्दा मान्छेको कुनैपनि कुरामा गहिराइमा ध्यान दिने र एकाग्र बन्ने क्षमतामा कमी आउँछ ।
लिङ्देनले मिश्र बोक्दा कमल थापाको नयाँ तयारी, राप्रपा फुटको टकराव
भाइरल चियावालीलाई सहयोग लिएर पुग्दा आ,शु था,म्न सकि,नन,आमाको सड,कमै ना,ङलो मा ब्यापार